Insizakalo Yezingxenye Zokugaya | Ningbo Daohong Machine Co., Ltd.
Izinsizakalo Zokugaya Insimbi NOKUNGQAMULA
UDaohong waziwa ngezinsizakalo zethu zokugaya nokugcagca okuphezulu, okusivumela ukuthi sifeze ukubekezelelana kwezinga elincane le-micron futhi ukuqeda komhlaba kungalingani nabancintisana bethu. Ikhono lethu lokuhlinzeka ngalezi zinsizakalo lidlulela kumashubhu nasocingo olunamadayimitha acishe abe mancane kakhulu ukubona.
Kuyini Ukugaya okungenasikhungo?
Ngama-grinders angenasikhungo, into yokusebenza isekelwa yinsimbi yokuphumula yomsebenzi futhi ibekwe phakathi kwesondo elilawulayo elisebenza kanzima elizungeza into yokusebenza kanye nesondo lokugaya elijikelezayo. Ukugaya okungenasikhungo kuyinqubo yokugaya ye-OD (ubukhulu bangaphandle). Ihlukile kwezinye izinqubo ze-cylindrical, lapho okusebenza kugcinwa khona emshinini wokugaya ngenkathi kugaywa phakathi kwezikhungo, umsebenzi awukhawulelwe ngomshini ngesikhathi sokugaya okungenasisekelo. Ngakho-ke izingxenye ezizogaywa kugraya ongenasikhungo azidingi izimbobo zesikhungo, abashayeli noma izinto zokwenza ikhanda ekugcineni. Esikhundleni salokho, okokusebenza kusekelwa emshinini wokugaya kububanzi bawo bangaphandle ngebhande lomsebenzi nangesondo elilawulayo. Indawo yokusebenza ijikeleza phakathi kwesondo lokugaya elinejubane elikhulu kanye nesivinini esihamba kancane esilawula isondo elinobubanzi obuncane.
Amasevisi Wokugaya Okuqondile
Ukugaya okungaphezulu kuyikhono elibalulekile elisivumela ukuthi sikhiqize uhla olwehlukile lwemikhiqizo, ukufeza ukubekezelelana kwezinga le-micron nokuqedwa kobuso kwehle kuye ku-Ra 8 microinch.
Yini Okuphakathi Kokugaya Izikhungo?
A phakathi kwezikhungo noma i-cylindrical grinder uhlobo lomshini wokugaya osetshenziselwa ukubumba ingaphandle lento. Isigaxa singasebenza ezinhlotsheni ezahlukahlukene, noma kunjalo, into kumele ibe ne-axis ephakathi yokujikeleza. Lokhu kufaka kepha akukhawulelwe kobujamo obufana nesilinda, i-ellipse, i-cam, noma i-crankshaft.
Kuphi Phakathi Kokugaya Kwezikhungo Okutholakala Kokusebenza?
Phakathi kokugaya izikhungo kugaya okwenzeka endaweni yangaphandle yento phakathi kwezikhungo. Kule ndlela yokugaya izikhungo zingamayunithi wokugcina anephuzu elivumela into ukuthi ijikelezwe. Isondo lokugaya nalo lizungeziswa endaweni efanayo lapho lihlangana nento. Lokhu kusho ukuthi lezi zindawo ezimbili zizohamba ziqonde lapho kuthintwa khona okuvumela ukusebenza okubushelelezi namathuba amancane okuhlangana.
Izici Zokusila Kwensimbi Ngokwezifiso
Inhlanganisela yethu yokugiga, ubuso, ne-CNC yokugaya iphrofayli ingaveza kahle ukukhiqizwa kwama-geometri anzima ama-axis amaningi kuzinsimbi okunzima ukuzenza ngomshini ophelile ongatholakali ezikhungweni zemishini. Amaphrofayili ayinkimbinkimbi, amafomu, ama-taper amaningi, ama-slots amancane, onke ama-engeli, nezingxenye zensimbi ezikhonjiwe konke kukhiqizwa ngejubane nangokunemba.
Isikhungo Esigcwele Sokugaya Insimbi
Insizakalo yethu yokugaya insimbi egcwele ifaka:
● 10 grindless centerless
● Abagibeli abayi-6 / amaphrofayili
● Okugaya okungu-4 komhlaba
Mayelana Nemisebenzi Yokugaya Precision
● Ukunikela ngokubekezelelana okungagijimi kokugaywa kuze kufike ku- ± 0.000020 ”(± 0.5 μm)
● Ububanzi bomhlaba buncane njengo-0.002 ″ (0.05 mm)
● Ubuso bomhlaba buqeda bushelelezi njenge-Ra 4 microinch (Ra 0.100 μm) kuzo zombili izingxenye eziqinile namashubhu, kufaka phakathi amashubhu odonga amancane, izingxenye zobude obude, nobubanzi bezingcingo bucishe bube ngu-0.004 ”(0.10 mm)
Lapho udinga ingxenye ephucuziwe kakhulu iphela, ukubekezelelana okuqinile ngokwedlulele, nokuhlala okungajwayelekile okungatholakali nganoma iyiphi enye indlela yokukhiqiza, sisebenzisa imishini yethu ehlukile yokushayelela endlini. Singakwazi ukucubungula amashubhu kanye nokuqina okuqinile sisebenzisa ukuqina kwethu okuhlangenwe nakho, ukugaya okuhle, kanye namakhono wokucija acabalele, okusivumela ukuthi sihlangabezane nezidingo zakho zokunemba nokubekezelelana. Ngokwengeziwe, amandla wethu wokukhiqiza aguquguqukayo asenza sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zevolumu ezinkulu nezincane zokunemba izingxenye ezincane zensimbi.
● Imishini eyi-10 yokuncisha ebamba ubude nobukhulu bokubekezelela ize ifike ku- ± 0.0001 ”(0.0025 mm)
● Amandla okuphela kwe-Ra 2 microinch (Ra 0.050 μm) aqeda kuzo zombili izingxenye eziqinile namashubhu, kufaka phakathi amashubhu odonga amancane kanye nezinto zobude obude
● Ubude busuka kufushane njengo-0.001 ″ (0.025 mm) bube ngu-3.0 maximum omkhulu (7.6 cm)
● Amamitha amancane njengo-0.001 ″ (0.025 mm)
● Amasu wangokwezifiso wokulungisa okungajwayelekile kwendawo nokufeza ukuthamba okuhlukile nokufana
● I-Surface metrology eqinisekiswe amasistimu amaningi we-LVDT asendlini kanye nama-profilometer wekhompyutha
Yiziphi Izinto Ezihamba Phambili Zokugaya Ubuso?
Izinto zokwenziwa ezijwayelekile zifaka insimbi yensimbi nensimbi emnene. Lezi zinto ezimbili azithandi ukuvimba isondo lokugaya ngenkathi kusetshenzwa. Ezinye izinto ziyi-aluminium, insimbi engagqwali, ithusi namanye amapulasitiki. Lapho kugaywa emazingeni okushisa aphakeme, okokusebenza kuvame ukuba buthakathaka futhi kuthambekele ekubonakaliseni. Lokhu futhi kungaholela ekulahlekelweni kukazibuthe ezintweni lapho kusebenza khona lokhu.